Oge ngwụcha nke Westworld 3 tọgbọ chakoo & emezughị - Pop Omenala
Ndị Na -Ekwu Okwu
Westworld bụ ihe efu, enweghị afọ ojuju na enweghị ike ịpụ
Ọ na -eme Westworld lowkey na -a ?ụ? Amaghị m nke ọma. Ndị ọrụ ibe m tweet chịkọtara mgbagha kwa izu nke na -abịa ile ihe nkiri a n'abalị ụnyaahụ nwere mkpụrụedemede 45 dị mkpirikpi. Na mbido, okwu ịdị mma ya edochaghị anya. Ọ bụghị naanị mmalite nke usoro - nke, n'agbanyeghị agbanyeghị ihe ị ga - eme, bụ Hall of Fame Great Pilot ™, nwere ezi ebumnuche - mana mmalite nke oge a. O nwere nkwa dị ukwuu. Ọ dị mma na iyi egwu Dolores na ihe ngosi TV na -abawanye nwere ugbu a ịmaliteghachi ma malitegharịa ọzọ na uche. Westworld s season 3 premiere bụ naanị nke kacha Westworld . Ogige ntụrụndụ pụrụ iche Oregon Trail facsimile elu ma na -adọba ụlọ nyocha dị n'okpuru ala? Gara. N'ọnọdụ ya, ndị ọbịa mmụọ ozi dị ka Dolores na onye na-emekọ ihe ọnụ Maeve nọrọ oge abụọ gara aga na-arọ nrọ, ụgbọ ala niile na-efe efe, ụlọ elu dị elu na uwe mara mma iji kwekọọ, dị ka aestheticof Batman gafere ejirila ike ya dị egwu wee rụọ ọrụ ndụ. Eweghachiri anyị Dolores na ọnọdụ neo-noir femme fatale, na-abọ ọbọ na uber-otu pasent na mgbakwunye ọhụrụ agbakwunyere dịka ndị na-eme ihe nkiri Tommy Flanagan na John Gallagher Jr. ihe na-agaghị amasị? Mana ka Dolores na onye bịara ọhụrụ Aaron Pauls Calebs jikọtara ọnụ, kama ịtụ anya oge ga -abịa kpaliri m atụmanya na nchekwube iji kporie ndụ ụtọ Westworld enweghị ndoputa mgbe ọ na -adịgide. Ma lee! Site n'izu nke abụọ, anyị abịaghachila n'ogige ntụrụndụ.
*Ndị na -emebi ihe maka ihe niile Westworld oge 3 soro*
esi thicken pịa ude ntu oyi
Westworld anọwo na -enupụ isi na nsogbu mgbe niile n'ụzọ ndị dị oke egwu. Okwu ya abụghị ihe a na -apụghị ịhụ anya: ihe nkedo a dị mma, mmefu ego dị ka ọ nwere ike ịkwagide ihe nkiri Marvel 2, nnukwu akụkọ a na -amanye. Ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ha kwesịrị ịdị. Ndị na-eme ihe nkiri di na nwunye Jonah Nolan na Lisa Joy amaghị ka esi akọ ya. Ma ọ bụ karịa, otu esi achịkọta iberibe ihe mgbagwoju anya ha maka itinye ego na mmetụta mmetụta uche kachasị; Ọ bụrụ na ụlọ ndị dere ha nwere bọọdụ ọnọdụ, ọ nwere ike bụrụ naanị onyonyo nke ya ndị na -agba izu Charlie Day meme . Onye isi na -emepụta ihe bụ J.J. Abrams bụ onye na -ede akụkọ na -akọ akụkọ akụkọ ihe omimi, mana ọ hụtụbeghị akụkọ ọ na -enweghị ike ime ka ọ dị mfe maka ibute ihe ọchị na akpa ụzọ. (Ewezuga ikekwe oge 3 nke Utu aha .) Nolan na Joy nwere ike jiri ya dezie ya. N’ezie, a ga-atụ anya mmekọrịta maka akụkọ web na-agbagọ agbagọ na ihe owuwu nke nwa bebi Russia site n’aka nwoke dere akwụkwọ. Memento na Nmalite (yana ndị ọzọ nwanne ya nwoke bụ Chris ihe nkiri ndị ọzọ mbụ). Mana ugbu a, were ya na ndị ochie ahụ gbatịrị site na awa abụọ ruo ọtụtụ oge na -enweghị ihe ọzọ ma e wezụga ịma mma nke na -akwado akụkọ ahụ. Mgbe obere oge gasịrị, aghụghọ na -adị gịrịgịrị.
Westworld na -enwetakarị ụzọ nke ya, na -ehie akụkọ na mgbagwoju anya nhazi maka ịdị omimi. Oge 1 kpụrụ akpụ usoro iheomume na nnukwu agwa tụgharịrị n'ihu ndị na -ege ntị ruo mgbe ọ pụtara nke ukwuu na mkpughe ahụ dakwasịrị ụda. Oge nke abụọ nọ n'ihu maka usoro iheomume ya abụọ - naanị, ọkụ na -enwu ọkụ nke e mere iji bulie ihe mgbagwoju anya na nsonaazụ mgbanwe Dolores robot gbanwere ozugbo ngwa ngwa ugbu a. Na oge 3? Otu usoro iheomume, mana agbanyeghị usoro ihe omume dị mkpụmkpụ (site na abụọ), ihe omume nke abụọ bụ mgbatị ahụ nke na -ejikwa mee Maeves -Maeve!
Oge 1 na -apụta dị ka oge kachasị mma na nlegharị anya ọ bụla (m wee tụgharịrị abụọ n'ihu 3 n'ihi na otu akụkụ m maara na -enweghị ncheta zuru oke nke nkata ahụ enweghị ohere ọ bụla ịnụ ụtọ usoro nke enweghị ọtụtụ ihe inye). Ọ na-egwu dị ka prequel nke ihe nkiri iri maka ezigbo ihe nkiri-nke pụtara ịdọpụta-mana ihe ọ na-enweghị ike na-eme ka ọ bụrụ mmepe. Thandie Newton enwela usoro a n'azụ ya nwa oge, mana nke ahụ agaghị ekwe omume na-enweghị oge na nlekọta etinyere na Maeves akụkọ nwayọ mana ejiri nwayọ na ike onwe onye. Ndị ọkacha mmasị dị ka Bernard ejirila usoro ndị ọzọ wezuga mmepe nke ha nwetara n'oge 1. Oge nke abụọ bidoro na ime ihe ike na ike mana ngwa ngwa gbabara n'ime usoro nzuzu nke MacGuffins na ndị na-enweghị mmalite, nke mere na site na oge anyị rutere teaser post-credits, kama ihe aghụghọ na-eme m meghachi omume na arụkwaghịm na ike ọgwụgwụ.
Oge nke 3 nyere ohere ịhazi ihe. Kama Nolan na Joy nwere ike tufuo atụmatụ ahụ kpamkpam. Bernard, onye ya na Dolores na Maeve na-eme ngagharị iwe nke ndị na-emekọ ihe ọnụ, nọrọ oge ahụ na-amalite n'otu oge n'iyi. William, ozugbo ihe ngosi a kacha atụkwasị obi na Maeve, hụrụ ka arc ya belatara nke ukwuu Ed Harris na -ewe iwe. (Ọnwụ ya bụ ogbugbu ebere - ozugbo agwa ahụ gbabara n'ime n'ụzọ nkịtị ka ọ na -eme mkpọtụ banyere otu ọ ga -esi zọpụta ụwa ọjọọ ugboro iri na abụọ n'ofe akụkụ abụọ, o doro anya na ọ bụ ihe mkpuchi.) Maeve chụrụ onwe ya n'àjà maka nwa nwanyị nke na -amataghị ya dị ka nke a - kama ịhapụ ya na ihe na -atọ ụtọ nke ikiri ka ya na nne ọzọ na -awụda n'ọdịda anyanwụ, a ka na -atụgharị njikọta dị ka ihe na -akpali ya. N'ịbụ onye onye omekome ọhụrụ kpuchiri, njirimara nke otu nnukwu oge na -ada ada: mkpofu nke nnukwu Vincent Cassel dị ka kaadị trillionaire ọjọọ nke, na ntughari uche, bụ onye isi ikpeazụ na -abịa Delos, Westworld na uh, the ụwa niile, oge a niile.
ebe ị na -azụta fondant maka achịcha
Ọ dị anyị mkpa nwoke a ebe a? Dramatizing Dolores wepụtara n'ụwa na ọchịchọ ịkwalite ọha mmadụ ga na -abụ isi awọ mgbe niile. Kama ibili na ihe ịma aka ahụ, anyị na -enweta Cassels Serac, onye na -agụ mmadụ: nwoke jọgburu onwe ya, onye jọgburu onwe ya na onye nzuzu - na -ahazi ụwa, n'ezie - ọ mere ka akụkọ ahụ dị mfe ojii na ọcha. Nke ka njọ bụ na ọ dị njọ dị ka hel, dị ka akọwapụtara na mmemme Serac-centric nke na-emeghị ihe ọ bụla iji kpuchie ya. Enwere ike ikwu otu ihe ahụ maka onye ọbịa ọhụrụ Keleb, onye kwere ka Pọl mee mope na ọnwa n'elu Dolores oge niile, gbaa egbe dị mma, na ọ bụghị ọtụtụ ihe ndị ọzọ. ihe omume ikpeazụ, na tupu ngwụcha nke ihe omume telivishọn, wee dọpụta ya n'ụzọ na -agwụ ike.
Echere m na oge dị mkpirikpi ga -edobe Westworld ngwa ngwa na ọkụ n'ụkwụ ya, kama ịgba ọsọ ka njọ. Oge 3 nwere nsogbu ụdịrị Westworld niile ... na -esote nke enweghị àgwà mgbapụta ya. Ọ tụgharịrị na arc a dị gịrịị enweghị mkpa maka ihe omume asatọ, na dịka nke a, ihe omume nke abụọ ma gaa n'ihu bụ otu ihe na -agbada, na -adị umengwụ mgbe ọzọ. Ewezuga ịbụ ihe omume 4, oge na -adịghị ahụkebe mgbe mkpụrụedemede iri na abụọ ma ọ bụ ihe dị iche iche chetara na ha nọ n'otu ihe nkiri ahụ na nchịkọta akụkọ ha gbakọtara na nkuzi nkukọ na -atọ ụtọ. Oge 2 nwere ike bụrụ ọdịda na nchịkọta akụkụ ya, mana opekata mpe akụkụ ndị ahụ dị mma n'onwe ha. Maka mkparị niile Shogun World nwere, nleta ebe ahụ abaghị uru ọ bụla-mana dị ka Craig Zobel siri nye ya, ọmarịcha njem nke nwere onwe ya. Ebube nke Sphinx siri na ya pụọ NTỤTARA akwụkwọ akụkọ iji kpughee ihe William na ụlọ ọrụ ọjọọ ya na -eme, oge niile na -enye ụzọ mgbapụta maka ya. Na Kiksuya nke agbụrụ Ghost Nation gbara ọkpụrụkpụ megharịrị otu n'ime akụkọ akụkọ fringe n'ime akụkọ ịhụnanya nke nyere esemokwu ikpeazụ obi na-akụ ya nke ukwuu. Style (Akane No Mai), ogbugbu (Sphinx), agwa (Kiksuya). Oge 3 enweghị ụdị ọla ọcha dị otú ahụ. Onye kacha dịrị anyị nso bụ mmụọ Aaron Paul na -a drugụ ọgwụ na -emepụta goofy nke nwere echiche ya na -agba ịnyịnya site na ụdị ihe nkiri. Pauls Caleb ji anya obi na -ele Dolores ebe akara ihe nkiri ihunanya na -abawanye ka ọ na -agbapụ ndị ọjọọ pụọ na -atọ ụtọ n'agbanyeghị.
Ugbu a, anyị nwere ụwa na -ere ọkụ, ọkụ Dolores nwụrụ (ugbu a onye nwụrụ anwụ nwụrụ anwụ na -atụ anya) ga -asachapụ mmadụ. Joss Whedon mere 'ndị ọgaranya niile na -eri anụ n'amaghị ama wetara ihe mgbaghara mgbagha dystopian' na akụkụ abụọ nke usoro ntụpọ ya nke ukwuu. Ụlọ nkịta . Ihe ngosi ahụ gosikwara ụlọ ọrụ nwere ndò na-eme ka echiche efu nke otu ụzọ na-efu ndị mmadụ na-enwewanye mmetụta, na adị ndụ ọzọ dị ka ọgwụgwụ. Okporo ụzọ ahụ dị mkpụmkpụ, enweghị obere ego na nkwarụ site na njedebe nke igwe mgbasa ozi TV. N'agbanyeghị nke ahụ, site na otu ụzọ n'ụzọ iri nke mmefu ego na ụfọdụ ihe na-emeju ihe dị egwu n'ezie, aga m azụ ahịa mgbukepụ nke na-egosi nturu ugo maka etiti HBO nwere oghere. Westworld , ebe Nlaghachi m na Investment Emotional na -ebelata na oge ọ bụla na -agafe. N'agbanyeghị nke ahụ, ikike ihe nkiri a, oke ọmarịcha ya na echiche na -eme ka ọ bụrụ ihe na -agaghị ekwe omume ịdepụ ya. Ọzọkwa: Jonah Nolan edekọla ụfọdụ n'ime ihe nkiri sci-fi kacha mma n'ime afọ iri na ọkara gara aga. iji hazie ma gbuo akụkọ ahụ n'ụzọ kacha agwụ ike. Hụ gị ebe ahụ.
SpongeBob Spinoff The Patrick Star Show Na -enweta Green Light Site na Nickelodeon
TIFF: Josh Hutcherson dị ọcha, ọ bụghị nke siri ike, na Escobar: Paradise Lost
Kedu ihe merenụ ịhụ fim ihe egwu dị egwu?
Lelee ihe nkiri maka Kevin Harts New Netflix Special Zero F ** ks enyere
Ndị egwu Ariana Grande meghachiri ihe ọchị Pete Davidsons gbasara nkewa ha na Netflix Stand-Up Special
la la anthony na -aghọ aghụghọ na carmelo
ndepụta nba nke oge niile
"ị na -egbu m obere"
nnukwu efere ọkara oge na -egosi nrụrụ arụ ọrụ
Ezigbo Nnụnụ Nnụnụ Biko Kwụrụ?
Kedu ihe kpatara ihe nkiri kacha enyocha nke afọ nwere ike ọ gaghị adị nnukwu mma.
Ndị na -eme ihe nkiri Game of Thrones na -ekwu nke ọma na usoro na Instagram
Ndị na -eme ihe nkiri n'azụ ụfọdụ usoro ihe nkiri kacha nwee akara ngosi na -ebu ụzọ chọpụta nke ikpeazụ.
Gayle King na -ekwu R. Kelly gbasara ya n'oge a na -agba ajụjụ ọnụ
Gayle King nọdụrụ ala maka ajụjụ ọnụ ya na onye na -agụ egwu Chicago ihere R. Kelly na mbido afọ a, na -ekwu maka ebubo mmetọ mmekọahụ e boro ya.